Nôrvezy - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Norvezy)
Praiminisitra Jonas Gahr Støre
Velarantany 385 207 km²
- Manontolo (2022)
I Norvezy dia firenena any Eorôpa Avaratra, ao amin' ny lafiny andrefan' ny saikanosy skandinava, miray sisintany amin' i Finlandy sy Soeda. Firenena tsy dia be mponina izy saingy isan' ny tany manan-karena, noho izy mamokatra solitany. I Oslo no renivohiny ary ny fiteny nôrveziana no fiteny ofisialy ampiasaina any aminy.
I Nôrvezy dia fanjakana enti-mpanjaka, Harald V no manjaka ao, ary mbola eo ambany fiandrianany ireo nosy kely toa ny nosy Jan Mayen, ny nosy Pierre Ier, ny nosy Bouvet, ary ny fitambaran' ireo nosy kelin' i Svalbard.
Ny firenena nôrveziana dia naneho ny mahairay azy sy ny finiavany hivelatra tamin' ny fotoan' andron' ny fanafihana nataon' ireo vikings, tamin' ny taonjato faha-9 ka hatramin' ny faha-11. Mpiantsambo nikoizana, vetivety dia nipaka tamin' ireo nosy manodidina ny herin' ireo Vikingy avy any Nôrvezy ireo. Na izany aza dia mbola tsy nisy fahefana niraisana tao Nôrvezy. Ny fifaneraserana dia mbola niankina betsaka kokoa tamin' ny dia an-lakana noho ny dia an-tanety. Tamin' ny taon-jato faha-8 dia mbola nizara ho fanjakana madinika niisa 29 i Nôrvezy.
Ny heverina ho mpanjaka voalohany nanapaka an' i Nôrvezy iray manontolo dia i Harald Tsara volo (872-933). Ny zanany lahimatoa, Erik "famaky Lian-dra" dia naongan' i Haakon ilay Tsara, lehiben' ny Vikingy , tamin' ny taona 935. Ny zafikeliny, Olaf Tryggvason (995-1000) no nandimby azy, saingy dia noroahin' i Sven "Somotra misamaka", mpanjakan' i Danemarka izy io. Tamin' izany, i Nôrvezy dia nifampizaran' i Sven sy ny Jarls avy any Trondheim. Ny mpanjaka Olaf Haraldsonn, izay nametraka ny renivohiny tao Trondheim, no azo heverina fa ray mpanorina ny fanjakana nôrveziana tamin' ny taona 1016. Ity mpanjaka ity, izay Vikingy teo aloha, no nitondra tamin' ny ny vahoakany tany Nôrvezy ny fivavahana kristiana.
Tamin'ny taonjato faha-13 dia nisy tovolahy mpanao anjoria anakiray nantsoina hoe Sverre Sigurdsson nandrombaka ny fitondrana ka nanangana dinastia vaovao , izay nitoetra tao Bergen. Noho ny fitomboan' ny herin' ny ligin' ny Hansea tao an-tanàna, dia nafindra tao Oslo ny renivohitra tany amin' ny fiandohan' ny taonjato faha-14.
Tamin' ny taona 1380 dia niara-maty tamin' ny mpanjaka Haakon VI ny dinastia norveziana. Ny vadin' ity mpanjaka ity, Margrethe avy any Danemarka, manko no nahazo ny fanjakàna ka nanomboka teo dia niray i Danemark sy Nôrvezy. Tonga nanampy io firaisana io, nantsoina hoe "Fiombonan' i Kalmar" koa i Soeda tamin' ny 1397. I Danemarka no firenena azo lazaina fa nitondra tao anatin' io fiombonana io, ary ny fiteniny rahateo no nampiasaina tanivon' ny fanjakana, ka i Nôrvezy dia toy ny faritany anankiray nentina ihany.
Ny fizakan-tena azon' ny Soeda, taorian' ny fikomian' i Gustave Vasa, dia nanafoana ny fiombonan' ny Kalmar tamin' ny taona 1523. Na izany aza, dia mbola teo ambany fanapahan' i Danemarka ihany i Nôrvezy. Tamin' ny tapany voalohany tamin' ny taonjato faha-16, dia nandray ny fivavahana loterana ny mpanjakan' i Danemarka, ary ny vahoakany rehetra dia nampanarahina izany koa.
Ny fanjakana danoà-nôrveziana dia niandany tamin' i Napoléon tamin' ny fotoan' androny. Koa rehefa resy ito farany dia nomen' ireo mpandresy an' i Soeda i Nôrvezy. Nanoloana izany, dia natsangana ny Antenimiera mpanorina, izay nivory tao Eidsvoll, ka nanambara ny fahaleovantenan' i Nôrvezy ary nandany ny lalàm-panorenana. Ary dia ilay andriandahy danoà, Christian-Frédéric no notendren' ny mpivory ho mpanjaka. Nisy ny fifanarahana tamin' i Soeda tato aoriana, ka nekena ny maha-fanjakana mitokana an' i Nôrvezy saingy eo ambany fanapahan' ny mpanjakan' i Soeda ihany. Tsy mora anefa ny nahatongavana tamin' izay satria tsy nety niala i Christian-Frederic raha tsy taorian' ny nandefasana tafika hanala azy.
↑ Arealstatistics for Norway 2019. Kartverket, mapping directory for Norway: (2019). Retrieved on 2019-03-22.
↑ Population, 2022-01-01 (in no). Statistics Norway: (2022-01-01). Retrieved on 2022-02-23.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Nôrvezy&oldid=1044189"
Dernière modification le 26 Febroary 2022, à 12:41
Voaova farany tamin'ny 26 Febroary 2022 amin'ny 12:41 ity pejy ity.